Zvishandiso zvepamhepo kuisa chena kumashure kune foto | Gadget nhau
Zvishandiso zvepamhepo kuisa chena kumashure kune pikicha
Paco L Gutierrez | 18/12/2020 19:02 | Yakagadziridzwa ku 21/12/2020 19:39 | Photography
Kugadziriswa kwemapikicha chinhu chinowanikwa nechero munhu ane nharembozha kana komputa uye izvi zvinotipa akasiyana mikana yekushanda nemufananidzo. Kuchinja mamiriro kumashure kuchena ndiko kunonyanya kukumbirwa nevanhu, asi havazi vese vanoziva zvechokwadi kuti ndeipi firita kana chishandiso chekushandisa kuwana ichi mhedzisiro. Mamiriro machena anopa mapikicha kutaridzika kwakaringana uye isina zvinokanganisa.
Pamusoro peizvi, chimwe chezvikonzero chingave chekuti tinoda kushandisa mifananidzo zvakanaka kuishandisa mugwaro repamutemo, senge yedu DNI kana rezinesi rekutyaira. Zvakajairika kwazvo kushandisa rudzi urwu rwechishandiso chemafoto mapikicha kana maavatat. Muchinyorwa chino tichaenda kuratidza sarudzo dzakanakisa dzekuchinja kumashure kwemifananidzo yedu kuti ichena nematanho akapusa.
1 Zvishandiso zvepamhepo kuisa chena kumashure
1.1 Bvisa BG
1.2 AI Kubvisa
2 Zvikumbiro zvekuisa chena kumashure pane nhare
2.3 Mashiripiti Eraser Nharaunda Yekunze Mupepeti
Zvishandiso zvepamhepo kuisa chena kumashure
Yakanyanya kuita webhu kunyorera iyo inotipa isu mupepeti anokwanisa kuziva vese vanhu nezvinhu kana mhuka. Ichabvisa zvachose iyo kumashure kubva pamufananidzo mumasekondi mashoma. Iyi webhu kunyorera iri nyore kushandisa sekupinda yayo yepamutemo webhusaiti.
Kunyangwe mashandiro ayo epamhepo ari chaiwo, isu tine desktop application kana zvichidikanwa, zvese zveWindows, MacOS kana Linux. Iyi desktop desktop inotipa iko nyore uye nebasa kudzima iko kumashure kweboka remapikicha muhuwandu ipapo ipapo.
Inogona zvakare kusanganiswa nemamwe maturusi akadai seZapier matinowana mamwe mamwe mapulagi kuti aibatanidze nemamwe mapuratifomu. Kana isu tichida chimwe chinhu chakafanana nevhidhiyo, mugadziri mumwe chete ane chishandiso chekudzima kumashure kwemavhidhiyo.
Chimwe chishandiso chakanangana nekudzima mari ndeyeKubvisa AI, iyo kune vakawanda ndiyo yakanakisa kubvira kwete chete inofunga nezve kubviswa kweiyo kumashure asi zvakare inowedzera post-kugadzirisa kuburikidza neyakagadzirwa njere iyo inopa iyo mufananidzo kuenderana iyo isina imwe webhu kunyorera inokupa iwe. Mhedzisiro mhedzisiro yakafanana chaizvo nezvatinogona kuwana neyekuzvipira foto mupepeti, chimwe chinhu chinofanira kukosheswa kana tichida kupa kupikisa kwakanyanya kushandiswa.
Muchidimbu, kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu nekukurumidza neBvisa BG isu tine zvakakwana, asi kana iwe uchida mhedzisiro "yakanaka", Kubvisa AI kwakanaka.
Zvikumbiro zvekuisa chena kumashure pane nhare
Kana tikatsvaga edhita mapikicha, tichawana akawanda matiri tina chishandiso ichi, asi hapana akawanda kudaro ita kuti zvive nyore kwatiri kuti tizvishandise ipapo ipapo. Pano tave kuenda kududziro ye3 akanakisa uye akapusa anowanikwa kune yedu nhare.
Imwe yematurusi anozivikanwa kwazvo ekugadzirisa mapikicha hapana mubvunzo kuti Adobe Photoshop, yakakwana kune ese makomputa uye smartphone kugadzirisa. Zviri nyore kuti zita riridze bhero nekuti mukuwedzera kune yekugadzirisa foto ine zvimwe zvinoshandiswa. Kunze kwekuisa chena kumashure kumifananidzo, isu tine sarudzo senge kubvarura mifananidzo, kuisa mafirita, kugadzira zvigadzirwa zvemunhu kana kugadzira watermark.
Tine shanduro dzakasiyana dzeichi chishandiso, pakati padzo dzatinowana vhezheni yeWindows, iyo vhezheni ye macOS pasi pekunyoreswa uye maapplication ema mobile terminals zvese ne Android Chemhondoro iOS. Kana iwe uchitsvaga chishandiso chakashanduka icho, pamusoro pekuve nechombo chinotipa basa iri, chinotibatsirawo kugadzira yakapusa mifananidzo yemifananidzo yedu, pasina mubvunzo iyi ndiyo sarudzo yakanakisa.
Download QR kodhi
Adobe Photoshop Express: mapikicha uye macollage
Ichi chishandiso chakatsaurwa chete kune iri rakatarwa basa, pasina mubvunzo rinonyanya kuratidzwa kana icho chete chinangwa chiri icho, kunyangwe inoshaya ese epamberi ekugadzirisa sarudzo ane Adobe. Iyo inokutendera iwe kudzima otomatiki mari pamwe neyakavanzika njere yekushandisa iyo pachayo. Uye zvakare, iko kunyorera kunotipa isu nemhando dzakasiyana dzemavara akajeka kuwedzera kune chena kana zvakatowanda zvigadzirwa.
Iko kunyorera kunotipa kuwanda kwetemplate, asi isu tinokwanisa zvakare kushandisa yedu pachedu mifananidzo kushandura iyo kumashure uye nekudaro kugadzira yakasarudzika matape. Iko kunyorera kunowanikwa kune ese ari maviri Android uye iOS, Kuvhiya kwayo kuri nyore kwazvo. Izvi zvinotibatsirawo kugadzira PNG ine mifananidzo uye nekuishandisa iyo kugadzirisa mifananidzo. Isu tinogona kuona ayo akasiyana mavhezheni uye zvinodikanwa mune yayo webhusaiti yepamutemo.
Mashiripiti Eraser Nharaunda Yekunze Mupepeti
Chimwe chikumbiro chikuru chakatsaurirwa chete kune kugadzirwa kwePNG uye kumashure kunyorera mafoto edu ayo akakwana kune vashandisi ve iPhone. Iyo inofungidzirwa nevashandisi vayo inonakidza kwazvo uye inonzwisisika yekugadzirisa kunyorera. Iko kunyorera kuri nyore kushandisa pane chero chinongedzo pane chakavharika pasina kudzikira kana kutadza.
Iko kunyorera kunotitungamira kuti tikwanise kugadzirisa mapikicha edu zviri nyore, Isu tinokwanisa kunongedza yakajeka mamiriro ekuumba PNG, machena mashure kana kumashure kubva kwedu pachedu gallery. Izvo zvinotipawo rusununguko rwekugadzirisa uye kudzoreredza iwo mafoto kune edu kufarira, kuwedzera mafirita kana kudzoreredza iwo mavara avo. Isu tinongofanirwa kurodha kunyorera kubva kuAppStore uye unakirwe zvachose pasina muripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Mufananidzo uye kurira » Photography » Zvishandiso zvepamhepo kuisa chena kumashure kune pikicha
Yakanakisa mitambo yekupfura yePC
Vimba mbeva uye makirabhu eema teleworking, zvakakosha here?